Buy PU Leather Car Seat Gap Organizer & Storage Box - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
PU သားရေကားထိုင်ခုံ Gap Organizer & Storage Box
$19.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $29.99
အရောင်အမည် PC အနက်ရောင်ညာဘက် လက်ဝဲက Black လက်ဝဲ အဝါရောင် Beige ညာဘက် Beige လက်ဝဲ - သားရေ သားရေအညိုရောင်ညာဘက် သားရေအညိုရောင်လက်ဝဲ အနက်ရောင်ညာဘက်သားရေ သားရေအနက်ရောင်လက်ဝဲ
PC အနက်ရောင်ညာဘက် လက်ဝဲက Black လက်ဝဲ အဝါရောင် Beige ညာဘက် Beige လက်ဝဲ - သားရေ သားရေအညိုရောင်ညာဘက် သားရေအညိုရောင်လက်ဝဲ အနက်ရောင်ညာဘက်သားရေ သားရေအနက်ရောင်လက်ဝဲ
PU သားရေ Car Seat Gap Organizer & Storage Box - PC Black Right backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: Crevice သိုလှောင်ကွက် / Bag ထိုင်ခုံ
ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ABS ပလတ်စတစ်, ရေမြှုပ်
feature ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည်, နေရာချပါ၊အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်,တစ်စက္ကန့်ထည့်သွင်းမှု
သင့်လျော်သော: စည်စည်းရုံးရေးမှူးအဘို့,တီဂွမ်အတွက်Smart 453 အတွက် Smart ForTwo အတွက်Ford Explorer အတွက်၊Volvo s60 အတွက်Hyundai Kona အတွက်Dodge သိုး 1500 အတွက် Hyundai Tucson အတွက် Mercedes w212 အတွက် Ford f150 အတွက်, Lexus အတွက်Toyota အတွက်Kia အတွက် BMW အတွက်, Audi အတွက်
Universal for: fit ကားများ
ယာဉ်ပေါ်တွင်နေရာချခြင်း - ရှေ့၊ ဘယ်၊ (ယာဉ်မောင်းဘက်)
Function: Storage Box၊ Coin Box၊ Cup Holder
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - ၂၆ * ၁၆ * ၂၀ စင်တီမီတာ / ၁၀.၂၄ * ၆.၃ * ၇.၈၇ လက်မခန့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်)
စမတ်ဖုန်း၊ ကားရပ်နားရန်လက်မှတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ရေခွက်စသည့်အပိုသိုလှောင်မှုနေရာဖန်တီးသည်။
Excellent Workmanship and Exquisite Looking - Made of superior PU leather, add fashion to your car interior
သေးငယ်သောအရာများ Gap သို့ကျဆင်းခြင်းကိုတားဆီးပါ။ console နှင့်ကားထိုင်ခုံကြားကွာဟချက်ကိုဖြည့်သည်။
Easy to Install - Just insert the gap storage box the seat and console, available forabigger gap Place phone, card, coin, money, key, cup and so on. The car seat organizer will save you countless times to keep important things up and running anytime and anywhere.
ကားသော့၊ ငွေတောင်းခံ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကားရပ်နားရန်ကဒ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊
Унашнивуподошлинонаоборот။ наводительскуюсторонуболтаетсясильно။ အထုပ်အပိုးများ напассажирскуюитакуюнормальную неотправлялиоченьдолго !!! ပို့ဆောင်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအရာများသည် un poco pequeñoဖြစ်သည်
99 es felcia-ba használható, az anyós oldalon ilyenkorabiztonsagi övet nem lehet bekapcsolni, de egyedülhasználomakocsit ။
منتج جميل جدا وجودة عالية ...اوصي بالبائع وشكرا علي اكسبرس